दर्ता कम्पनी को - वकिल डेनमार्क मा. सबै वकिल अनलाइन
दर्ता कम्पनी को
काम गर्न जाने, र व्यापार प्रविष्ट, आधारभूत जानकारी र तपाईं व्यापार मालिक । यो पूर्ण मुक्त सुरु गर्न एकखैर तपाईं दर्ता, 'भ्याट दर्ता'. कि कम्पनीहरु संग काम स्वास्थ्य सेवा जस्तै दन्त, भौतिक, मनोवैज्ञानिक आदि. पर्छ टिकटिक 'पेरोल कर' भने । तपाईं सुरु गर्नुपर्छ व्यक्तिगत स्वामित्व एकमात्र स्वामित्व रूपमा, सबैभन्दा उद्यमिहरु, के तपाईं हुनुपर्छ मा प्रभाव पाउन पहिले एकमात्र स्वामित्व छ । जब यो पेज खुलेको छ, तपाईं पर्छ भर्न आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, के व्यापार को प्रकार तपाईं सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं कर्मचारीहरु, निर्यात वा आयात एम. वी तपाईं खुलेको दर्ता एकमात्र स्वामित्व संग आफ्नो, तपाईं बस क्लिक गर्नुहोस्, पठाउनुहोस्, र सबै आफ्नो जानकारी पठाइने प्रासंगिक अधिकारीहरूले गर्न. तपाईं अब को मालिक व्यक्तिगत आफ्नै व्यवसाय छ र तपाईं प्राप्त हुनेछ, धेरै चाँडै आफ्नो (केन्द्रीय व्यापार दर्ता).
एक सामान्य साझेदारी सिर्जना त्यसै तरिका को रूप मा एक एकल स्वामित्व छ । बस मा एक एक भन्दा बढि मालिक । सबै को साझेदारी एस मालिकको हुनुपर्छ å लागि एस र संयुक्त रूप र उत्तरदायी लागि साझेदारी ऋण छ । यसको मतलब यो हो कि भने को एक मालिक छ, बैंक मा पैसा वा इक्विटी मा एक घर, र अन्य कुनै पैसा छ, उहाँलाई जस्तै छ जो, एक भाग्य गर्न आउन को लागि उत्तरदायी हुन एक संभवतः छ । ऋण रूपमा, थियो प्रक्रिया हो । एक ææ सिर्जना गर्न सकिन्छ, एक मुद्रा को लागि.
छ एक 'सानो भाइ', विषय, तर, लागू गर्न केही सख्त आवश्यकताहरु को लागि राजधानी को थुप्रो छ । सक्छ कि अन्य कुराहरु, कुनै लाभांश भुक्तानी छ पहिले यो सुरक्षित छ.
माथि मा कम्पनी । तर अन्यथा ææ पनि एक अलग कानूनी इकाइ रूपमा बस एक एस छ, जहाँ तपाईं एक्लै छन्, उत्तरदायी संग आफ्नो जम्मा.
एक सीमित कम्पनी छुट्टै कानूनी एकाइ हो, जो चाहिन्छ.
सुरु-अप राजधानी । तपाईं पनि यो बनाउन, या तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् एक लेखापाल वा वकील को लागि यो गर्न.
मा एक æ तपाईं एक्लै राजधानी संग तपाईं मा राखे कम्पनी, तर बैंक हुनेछ अक्सर आवश्यकता कि तपाईं लागि कम्पनी ऋण भर बैंक । तपाईं प्राप्त गर्नुपर्छ कम्पनी नै छन्, विभिन्न कुराहरू तैंले तयार गरेको छ । को स्थापना एक सीमित दायित्व कम्पनी र सृष्टि.
यदि तपाईं बनाउन æ व्यापार गतिविधिहरु, अर्थात् छ । तपाईं किन्न वा उत्पादन केहि, तपाईं बेच्न गर्न ग्राहकहरु, र आफ्नो कारोबार अन्तर्गत. तथापि, तपाईं अझै पनि कर तिर्न आवश्यक मा आफ्नो मुनाफा. एक हुँदैन शुल्क भ्याट र पनि सक्दैन पुल. एक मुक्त को दाना गरेको सदस्यहरु, जो मदत तपाईं अधिक पाउन काम र अन्य संग आत्म-कार्यरत मान्छे आफ्नो क्षेत्र मा. पाउन र बोली मा कार्यहरू देखि, को आसपास å मा जहाँ कम्पनीहरु र सार्वजनिक शरीर, र राखे कार्य गर्न प्रस्ताव मा सबै दाना सदस्य । यहाँ तपाईं गर्न सक्छन् बोली तिनीहरूलाई मा - एक्लै वा सानो समूह ।. पठाउन एक राम्रो प्रस्ताव बाहिर नेटवर्क मा - वृद्धि र आफ्नो å तपाईं सिर्जना एक बोली मा, तपाईं बनाउन आफ्नो व्यापार देखिने हजारौं को आत्म-कार्यरत दाना-सदस्य गर्ने हराइरहेको हुन सक्छ ठ्याक्कै के तपाईं प्रदान गर्न सक्छन्. एक उद्धरण गर्न सक्छन् फा एक निश्चित हुन छुट मा आफ्नो प्रदर्शन ।. आफ्नो सिर्जना एक निजी प्रदान र मदत पाउन जब तपाईं कमी तपाईं को लागि देख रहे मदत लागि एक कार्य छ, तपाईं पनि राखे कार्यहरू प्रस्ताव मा प्राप्त र योग्य बोलपत्र देखि अन्य आत्म-कार्यरत । जब तपाईं बनाउन एउटा प्रस्ताव लागि, तपाईं यसरी, पनि एक ठोस प्रस्ताव मा कार्य, समाधान गरिएको छ ।. गरौं कार्यहरू प्राप्त गर्न नक्सामा -अनुप्रयोग तपाईं स्वतः थिइनँ छ जब सिर्जना, एक बोली वा प्रदान गर्न प्रासंगिक छ कि तपाईं र तपाईंको व्यापार छ । तपाईं के छनौट रोचक छ तपाईं को लागि छ र तपाईं गर्न सक्छन् सधैं बन्द स्वचालित सन्देश फेरि ।.
आय कर फिर्ती
MITÄ SINUN TÄYTYY TIETÄÄ AJAA VIRKSOMHEDSKE YHTEISÖN ENNEN RAJAN. HINNAT, LUOTTO-JA FORSØGELSE YHTEYDESSÄ. Kädet - Miten tehdä itse